Etu ị ga - esi chọta onye na - eweta Bochum kwesiri ntụkwasị obi | ECommerce ozi ọma
Otu esi achọta onye na-eweta nnabata a pụrụ ịdabere na ya
Susana Maria Urbano Mateos | | Nche, StartUps na ndi oru itumgbere ahia
Chọta onye na-eweta ọrụ Ezigbo ntụkwasị obi na Bochum Ọ nwere ike ịbụ ezigbo ọrụ siri ike. Ndị bịara ọhụrụ na-adakarị ma nwee mgbagwoju anya, yabụ ha na-ahọrọ ịhọrọ ndị na-eweta ọrụ ohere na-akparaghị ókè ma ọ bụ karịa, maka ọnụahịa ahụ. Eziokwu bụ na enwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ a ga-atụle ga-eme nke ọma na ịhọrọ onye nlekọta weebụ.
Ọ bụghị ihe nzuzo nye onye ọ bụla na ntụkwasị obi na ọsọ na nsogbu nnweta metụtara ya ọtụtụ webmasters ma ọ bụ ndị nchịkwa saịtị. Ọtụtụ ndị na-eweta Bochum na-akọwapụta uru na ọghọm nke ọrụ ha, agbanyeghị ha na-ahapụ otu akụkụ dị oke mkpa: Oge ọrụ.
Maka saịtị Ecommerce, Azụmaahịa gị dara ụda n'ihi ọsọ ọsọ, ọ na-atụgharị naanị na ọnwụ nke ndị ahịa. Ndị ọrụ anaghị enwekarị ndidi ma ọ bụrụ na ibe na-ewe ogologo oge iji gosi gị, ha anaghị ala azụ ịhapụ ya ma chọọ ebe ọzọ. Ya mere, na mkpokọta okwu, a mma Bochum na-eweta ga - enye oge nke 99% ma ọ bụ karịa.
Nke a bụ mgbe ahụ ọrụ nlekọta weebụ nke kwesiri igbado ebe ọ bụ na ngwa ngwa saịtị anyị na-ebu ngwa ngwa, ka mma ahụmịhe nke ndị ọbịa ma ọ bụ ndị nwere ike ịzụta. Enwere ọbụna ndị na-eweta nnabata web na-atụkwasị obi nke ukwuu na pasent ọrụ ha na ha na-enyekwa nkwa ịkwụghachi ego ma ọ bụrụ na ọnụọgụ ọrụ dara n'okpuru ihe akpọsa.
Ọ bụkwa eziokwu na ịchọta a Ezigbo ntụkwasị obi na Bochum Okwesighi ibu oru ewepuru ego. Obi abụọ adịghị ya na anyị niile na-achọ ọnụahịa kachasị mma na ntanetị weebụ, agbanyeghị ntụkwasị obi na arụmọrụ kachasị mkpa chọrọ itinye ego. Y’oburu n’ichoghi iweputa mmefu a, i gba oso ihe ize ndụ nke ịnye Bochum na n'ikpeazụ ga-emesị mepụta mmefu karịa uru.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Eziokwu na akụkọ » StartUps na ndi oru itumgbere ahia » Otu esi achọta onye na-eweta nnabata a pụrụ ịdabere na ya
Andalucía Emprende, ihe omume maka ndị ọchụnta ego na Marbella